सराङकोटमा जीवन्त अक्षरहरु | eAdarsha.com
सराङकोटमा जीवन्त अक्षरहरु
नेपाल लिटरचेर फेस्टिभलको नवौं संस्करण मंगलबार पोखराको सराङकोटमा सुरु भएको छ । औपचारिक उद्घाटन सत्रमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ‘साहित्यको अर्थ’ विषयमा विद्वत्प्रवचन दिए । विद्वत्प्रवचनमा उनले नेपालमा साहित्यलेखनको सुरुवात र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावका विषयमा बोले ।
त्यसपछिको सत्रमा मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास महारानीका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँसँग पत्रकार राजकुमार बानियाँले ‘महारानीको राजनीति’ शीर्षकमा छलफल चलाए । मदन पुरस्कार पाउनुअघि लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँ साहित्यका पाठकमाझ गुमनामसरह थिए । कहिल्यै कुनै पुरस्कार नपाएका उनले ‘महारानी’ उपन्यासबाट एकै पटक नेपाली साहित्यको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार मदन पुरस्कार पाए । लेखक स्वयंलाई चकित पार्ने यो पुरस्कार उनी हाल बस्दै आएको सहर पोखराका लागि पनि ‘सरप्राइज’ भयो । म्याग्दीमा जन्मेका चन्द्रप्रकाशकै शब्दमा उनले मदन पुरस्कार जितेको खबर ‘पोखराका लागि हर्ष न विस्मात्’ सरह भयो ।
लेखक चन्द्रप्रकाशले मदन पुरस्कारपछि पोखराको प्रतिक्रियाबारे बताए । पत्रकार राजकुमार बानियाँसँगको अन्तर्संवादमा उनले भने, ‘मदन पुरस्कार पुरस्कार पाएपछि विभिन्न संस्थाले छलफल आयोजना गर्नुभयो । त्यसबाहेक पोखराले अझै पनि मलाई चिन्दैन, गुमनाम नै छु ।’
‘कर्मठ केटीहरु’ सत्रमा सोचाइकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोनिता शर्मा, खाली सिसी म्यानेजमेन्ट प्रालिकी संस्थापक आयुषी केसी र अलोइ टेक्नोलोजिजी सहसंस्थापक सोनिका मानन्धरसँग आभाष्ना पाण्डेले संवाद चलाइन् ।
बोनिता र सोनिकाले चाहिँ युवा व्यवसायीलाई सरकारले तक्मा दिनुभन्दा काम गर्ने वातावरण र अवसर मिलाइदिए पर्याप्त हुने बताए । ‘दुर्भाग्यको कुरा, नेपालमा विदेशीले ठप्पा नलगाइदिएसम्म कसैले पत्याउँदैन,’ बोनिताले भनिन्, ‘म बीबीसीको सूचीमा पर्नुअघि हत्तपत्त मान्छेले मेरो काम, कुरा सुन्दैनथे । अहिले चेली, छोरी भन्दै व्यवहार गर्छन् ।’ बिबिसीको सूचीमा परेपछि आफूलाई वाग्मती प्रदेशको योजना आयोगको एक समितिमा सदस्य बनाइएको उनले अवगत गराइन् ।
विकासका नाममा हाम्रो परम्परागत जीवनशैली जसरी परिवर्तन गरिएको छ, त्यसले एक किसिमले बाहिरबाट हेर्दा विकास देखिए पनि अन्तस्करणबाट विनाशको बाटो लिइरहेकोबारे चर्चा भयो । भूकम्प एवं प्राकृतिक विपत्तिले जहिले पनि मानिसलाई सही जीवनपद्धति अपनाउन र सोहीअनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो त्यति नअपनाइएको उनीहरूले बताए । यो सत्रमा डोजर विकासले पौराणिक बस्तीलाई ध्वस्त पार्न लागको अवस्थाबारे पनि चर्चा भयो ।
‘कोरोनाले गलाएको जनस्वास्थ्य’ सत्रमा सहभागी रहे, संक्रामक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा. अनुप सुवेदी, डा. अनुप बास्तोला, डा. रोलिना धिताल र पत्रकार सोविता गौतम । यो सत्रमा विशेषगरी कोभिडले मानव जीवनमा पारेको सकारात्मक एवम् नकारात्मक प्रभावबारे छलफल भयो । नेपालमा कोभिडले जनस्वास्थ्यलाई गलाएको होइन, हामीलाई पाठ सिकाएको हो । विश्वका अरु मुलुकले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेको र नेपालले भने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । जनताको स्वास्थ्यका लागि विभिन्न नीतिनियम बने पनि प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा पनि चर्चा भयो । त्यसैले कोभिडबाट पाठ सिकेर भविष्यमा आउन सक्ने अन्य महामारीका लागि पूर्ण तयारीका साथ जुझ्न तयार हुनुपर्नेमा उनीहरु सबैले जोड दिए ।
मंगलबारको अन्तिम सेसन ‘अद्भुत व्यक्तित्व, आधारण लेखन’ रह्यो । यसमा मनुजबाबु मिश्रबारे उनका सुपुत्र रोशन मिश्र र मदनमणि दीक्षितबारे साहित्यकार एवं दीक्षितकी सुपुत्री इल्या भट्टराईले बोले । उक्त अवसरमा रोशनले कलाकार मनुजबाबुको कलाकारिता, उनको जीवनशैली एवम् लेखन आदि विविध पाटोमा आधारित रहेर आफ्ना विचार राखे । मनुजबाबुको लामो समयको गुप्तवासका रोचक प्रसंग पनि उनले खोतले । साथै भट्टराईले पनि दीक्षितको जीवनशैली, उनको योगदान र जीवनका फरकफरक पाटोका विषयमा चर्चा गरिन् । दुवै व्यक्तित्व असाधारण एवम् अद्भुत रहेको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
फेस्टिभलको औपचारिक उद्घाटनअघि सोमबार साँझ गजल मेहफिल कार्यक्रम राखिएको थियो । फेस्टिभलको नवौं संस्करणमा १५ भन्दा बढी सेसन र करिब ५० जना वक्ता छन् । भर्चुअल रूपमा गरिने भएकाले यस पटक दर्शकको उपस्थिति छैन । फेस्टिभलका सबै सत्र सामाजिक सञ्जाल एवम् फेस्टिभलको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ । साथै डिसहोमको सरोकार टिभीबाट पनि फेस्टिभलका सबै सत्र हेर्न सकिनेछ । नवौं संस्करणको फेस्टिभलमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कलाकार र विशिष्ट व्यक्तित्व वक्ताका रूपमा छन् ।